itnadamtui: Wifi Hacking tools
လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ . တစ်ခြား ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မပါပါဘူး . လေ့လာတာတော့ ကို့ဟာကိုပဲ ကျုပ်ကျက်လိကြပါ . တစ်ခြားဟာလေးတွေလဲ လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးပါဦးမယ် . အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ... ကျွန်တော်တော့ မစမ်းရသေးဘူး . အခုတစ်လော နာမည်ကြီးနေတဲ့ AIO ကိုလဲ ကိုပါ ထည့်ပေးထားတယ် . အသစ်ရလာရင် တင်ပေးပါဦးမယ် . ကို့ဟာကို စမ်းကြပါ . ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်ဝါသနာမပါဘူး . ကို့ရုံးခန်းနဲ့ကို ဆိုတော့ ဘာ password မှာလဲ မလိုဘူးလေ . password က ကို့လက်ထဲမှာဆိုတော့ သိပ်စိတ်မပါဘူး . လိုက်စမ်းရမှာ .
Download mediafire ၊ Download ifile.it
ဒါက အခုနောက်ပေါ် Wireless Hack Tools (2009) software ပါ .. စမ်းချင်ရင် Download လုပ်လိုက်ပါ . ကြိုပြောထားပါတယ် . ကိုညီနေမင်းက လက်လှမ်းမီ သလောက်ကလေး တွေ့တဲ့ software များကို ဝေမျှနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူများတွေပြောပြောနေတဲ့ Hacker မဟုတ်သလို ဘာကာ မှလဲ မဟုတ်ပါ . Joker တော့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ပြောမရဘူး . ကြိုပြောထားမှ မဟုတ်ရင် နေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့ ဆွဲစိခံနေရဦးမယ် .. ဆွဲစိတော့ မခံနိုင်ဘူး . မတောက်တခေါက်ပညာလေးနဲ့ ပါသွားရင် ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့ . ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ ချကြဗျာသိလား . သူများနိုင်ငံမှာပဲဟာ . ထိုင်းကလူတွေက နဲနဲဒူတယ်ဗျ . ဗျင်းသာဗျင်း . မသနားနဲ့ . သူတို့က ကို့နိုင်ငံသားကိုလဲ သနားတာမဟုတ်ဘူး . ကျွန်တော်ကတော့ အားပေးတယ် . ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ . ဘာပဲလုပ်လုပ်ပေါ့ .
Download Wireless Hack Tools (2009)
Indsendt af itnadamtui kl. 20.01